बुटवल पावरको नाफामा १४ प्रतिशत वृद्धि | गृहपृष्ठ
Home लगानी बुटवल पावरको नाफामा १४ प्रतिशत वृद्धि
on: May 12, 2019 लगानी
बुटवल पावरको नाफामा १४ प्रतिशत वृद्धि
वैशाख २९, काठमाडौं (अस) । चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनामा बुटवल पावर कम्पनीले रू. ७५ करोड ८ लाख ७३ हजार खुद नाफा गरेको छ । यो नाफा गत वर्षको यसै समयमा रू. ६५ करोड ९२ लाख १४ हजार थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष १३.९० प्रतिशतले नाफा बढेको हो ।
एफपीओ र बोनस शेयरमार्फत चुक्तापूँजी वृद्धि गरी रू. २ अर्ब ४४ करोड ५ लाख ५५ हजार पुर्‍याएको छ । कम्पनीको जगेडा कोष रकम रू. ४ अर्ब ३६ करोड १६ लाख २८ हजार रहेको छ । जगेडा कोष रकम भने गत वर्षभन्दा ५ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
यस वर्ष कम्पनीले विद्युत विक्रीबाट रू. ५२ करोड ९७ लाख ९९ हजार आम्दानी गरेको छ । यो रकम गत वर्ष रू. ५२ करोड ७८ लाख ६५ हजार रहेको थियो । गत वर्षभन्दा यस वर्ष विद्युत विक्री आम्दानी ०.३६ प्रतिशत मात्र वृद्धि देखिएको छ । यो ९ महीनासम्म कम्पनीको प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३० दशमलव ७७ रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ रू. २७८ दशमलव ७१ रहेको छ ।
बुटवल पावर कम्पनीको नगद लाभांश बुधवारदेखि वितरण
बुटवल पावर कम्पनीको २८% लाभांश पारित